IZINDLU EZIDUMILE E-HOTSPRING VILLAGE (HG-6771)
(107 okushiwo abanye)
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Petur
UKWENZEKA OKUMANGALISAYO ENDAWENI EKHETHEKILE EPHAKATHI KOMUZI OMUHLE ENINGIZIMU ICELAND – Ibhodwe ELISHISAYO EMPHESHINI ELIBONAKALA OKUBUKELELE IZINTABA KANYE NEZINTHUTHUTHUTHU EZINGASENZI. (HG-6771)
I-Hveragerdi iyidolobhana elihle eliseduze nemvelo. Le ndawo edumile yasentwasahlobo eshisayo ilungele ukuhlala eduze (imizuzu engama-30-60 ukushayela) ezindaweni eziheha izivakashi eziseNingizimu ye-Iceland njengeGolden Circle edumile, i-The Nation Park Þingvellir, ilungele ukubona iNorthern Lights, iGullfoss ( Impophoma yegolide) nezinye izinto eziningi ezikhangayo njenge-volcano crater yase-Kerið, i-Skálholt Church, i-Nesjavelir isitshalo samandla ashisayo kanye ne-Laugarvatn Fontana eyingxenye yesitimu. Zonke izinsiza ezijwayelekile zabavakashi ziyatholakala futhi zifinyeleleka kalula.
I-Hveragerdi itholakala ku-45 km ukusuka e-Reykjavik ingase ibonakale endaweni ephakeme yentaba yase-Kambar, njengoba isabalele insimu ye-lava eneminyaka engu-5,000 ubudala. Unyaka wonke, izinsika zomusi ezivela eziphethwini eziningi ezishisayo edolobheni zingase zibonakale zikhuphuka ziphuma phansi. Ehlobo idolobhana liwumphakathi oluhlaza ngempela, ogcwele izihlahla.
I-villa encane (75m2) ikhululekile kakhulu futhi ithokomele - ihlotshiswe ngesitayela sezwe esithokomele esinemithombo eshisayo nxazonke. Indlu iphakathi kwedolobha iHveragerdi ngakho yonke into ingaphakathi kwebanga lokuhamba; isitolo segrosa, amabhikawozi, indawo yokubhukuda yasendaweni, izindawo zokudlela, i-spa njll.
I-Villa ingakwazi ukuhlalisa abantu abangu-4, ihlanganisa amakamelo okulala amabili elilodwa elinombhede wendlovukazi kanti elinye linosofa okhululekile wabantu abangu-2 kanye negumbi lokugezela elihle elinezindawo zokugeza. Ikhishi negumbi lokuphumula kuvulekile kakhulu endaweni evulekile.
4.75(107 okushiwo abanye)
4.75 · 107 okushiwo abanye
Ngaphandle kokungabaza igugu eliyigugu kakhulu e-Hveragerði i-Geothermal Park yayo. Awekho amadolobha amaningi emhlabeni anemithombo yamanzi ashisayo ngemuva kwegceke labantu. I-Geothermal Park iphakathi nendawo. Ungabona isiphethu esishisayo esivela endlini, ngaphakathi uma ufuna! Ukugeza okungokwemvelo kwezinyawo zobumba kungajatshulelwa epaki futhi ngemva kwalokho ungakwazi ukucwilisa izinyawo zakho kwesinye seziphethu ezishisayo. Emgodini epaki abantu bendawo babhaka isinkwa esimnyama esidumile besebenzisa umhlabathi we-geothermal njengohovini. Ungakwazi ukubilisa iqanda emanzini ashisayo futhi kamuva ujabulele ukufudumala nesinkwa. Isiqondiso sinikezwa khona lapho. Ngesikhathi sokuphumula sicela uthinte ihhovisi lemininingwane lendawo elihlela ukuvakasha kwamaqembu uma ucelwa. Amamitha angu-50 kuphela ukusuka e-Geothermal Park indawo yokudlela esebenzisa ukushisa kwe-geothermal ekhishini layo langaphandle izivakashi ezilithola lilihle nje.
I-Hveragerði inokuningi esikunikezayo. I-trout kanye ne-salmon zibhukuda emfuleni i-Varmá, amajikijolo angatholakala lapho evunwa endaweni engasentshonalanga yedolobha, futhi indawo igcwele izindlela ezihamba phambili zokuhamba. Ingasaphathwa yokubhukuda, ukuthi iminyaka yayiyichibi elikhulu kunawo wonke e-Iceland. Indawo ezungezile yinhle ngendlela emangalisayo. Kukhona okugeza ashisayo, whirlpools, sauna yemvelo kanye nesikhungo sokufaneleka. I-swimming pool ivuliwe unyaka wonke.
Njengoba imbongi yathi: “I-Hveragerði iyindawo engcono kakhulu emhlabeni”.
Indawo ezungezile i-Hveragerði iyipharadesi labantu abangaphandle abafuna ukuphumula ekuphumuleni e-Villa. Kunezindlela ezinhle zokuhamba izintaba ngaphakathi kwedolobha ezixhumeka nenethiwekhi yemizila emhlabeni we-Agricultural University of Iceland phansi kweNtaba iReykjafjall nase-Ölfusborgir. Kukhona futhi izindlela zokuqwala izintaba endaweni yokungcebeleka ezansi kweHamar Mountain. Ukusuka entabeni kukhona ukubukwa okuhle komhlaba nokuphumela olwandle. Kukhona izindlela zokuqwala izintaba ezithakazelisayo ngaphakathi kwedolobha.
Abantu bendawo base-Hveragerði benza konke okusemandleni abo ukuze benze izihambeli zizizwe zamukelekile. Idolobhana linokuningi okunikezwayo, uhla lwemisebenzi ethokozisayo, izindawo zokudlela nokuhlala okubandakanya indawo yokukhempa enhle kakhulu enezindawo ezisezingeni lokuqala ezitholakala ensimini nguFagrihvammur. I-To South Iceland Tourist Information Centre inikeza ulwazi mayelana nezindlela zokuhamba izintaba, imisebenzi ehlukahlukene, iminyuziyamu, imibukiso, amasiko, ubuciko, indawo yokuhlala, izinsizakalo kanye nokuvakasha okuqondisiwe kwe-Hveragerði nendawo eyizungezile.
Kweminye imisebenzi kukhona i-Jetski (i-imeyili efihliwe)ínavatn kanye ne-angling isibonelo eLakes Apavatn namanye amanzi azungezile.
Izivakashi zizoba nendlu ezizoyisebenzisela zona noma zizozisebenzisela zona. Nginobungane kakhulu futhi nginomoya wokungenisa izihambi ngakho ngicela ungangabazi ukungithinta uma udinga okuthile noma unemibuzo eyengeziwe lapho uhlala khona.
Isikhathi sokuphuma singo-12:00 emini kanti ukungena kungo-14:00 noma kamuva uma uthanda.
Izivakashi zizoba nendlu ezizoyisebenzisela zona noma zizozisebenzisela zona. Nginobungane kakhulu futhi nginomoya wokungenisa izihambi ngakho ngicela ungangabazi ukungithinta uma…
Hlola ezinye izinketho ezise- Hveragerði namaphethelo